Siyaasadda Gobolka - Isbahaysiga Caafimaadka ee Muhaajiriinta & Qaxootiga
Kal-fadhigii Sharci-dejinta ee 2021-kii ee Gobolka Washington ayaa lagu ansixiyay sharciyo dhowr ah iyo barnaamijyo cusub isagoo matalaya soogalootiga. In kasta oo ay kuwani yihiin tallaabooyin loo qaaday dhinaca saxda ah, haddana waxaa jira hawlo badan oo u baahan in la qabto. Fadlan eeg hoosta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah:
Sanduuqa Taakulaynta Muhaajiriinta Washington (WIRF) - WIRF waxay heshay koror aad u ballaaran oo ka yimid sharci-dejinta gobolka iyo Guddoomiyaha kal-fadhigan la soo dhaafay, oo ah $ 340 milyan oo dheeri ah oo lagu daray $ 127 milyan oo hore loogu qoondeeyay. Sanduuqan ayaa loo qoondeeyay in lagu bixiyo lacagaha muhaajiriinta ee laga xiro noocyada kale ee gargaarka masiibada ah, sida jeegaga kicinta iyo caymiska shaqo la'aanta, sababtoo ah xaaladdooda sharci-darrada ah. Fadlan la soco Immigrantreliefwa.org wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijkan.
$ 35 milyan ayaa loo qoondeeyay deeqda deeqda ah ee hal mar deeqaha la siiyo bixiyeyaasha bixiya adeegyada daryeelka caafimaadka bukaannada aan caymiska lahayn iyo kuwa aan caymiska ku jirin, iyadoon loo eegin sharciga socdaalka. Isweydaarsiga Gargaarka Caafimaadka (HBE) sidoo kale waxaa la faray inuu sahmiyo fursadaha si loo fududeeyo isqorista dadka laga reebay barnaamijyada Medicaid ama federaalka ee barnaamijka caafimaadka gobolka sanadka 2024. Hal ikhtiyaar ayaa ka mid ah HBE si loo horumariyo loona soo gudbiyo arjiga federaalka tanaasulka, taas oo u oggolaan karta dadka aan sharciyeysnayn inay ikhtiyaarrada ka iibsadaan Isweydaarsiga.
Daryeelka qaybta dambe kadib illaa 12 bilood - SB5068 waxaa mariyey Sharci dejinta oo waxaa saxeexay Gudoomiyaha oo balaadhinaya caymiska Apple Health ilaa 12 bilood dhalmada ka dib si loo hubiyo sii wadida daryeelka iyo caymiska. Tani waa waqti dheeri ah oo laga soo bilaabo 60keedii maalmood ee asalka ahaa ee laga warbixinayay dhammaan dumarka la kulmay shahaadooyinka dakhliga, iyadoon loo eegin muwaadinimada ama sharciga socdaal.
Mamnuuca Xabsiyada Gaarka loo Leeyahay - HB 1090 waxaa soo mariyay sharci dejinta waxaana saxiixay Gudoomiyaha oo soo afjaraysa dhamaan xabsiyada gaarka loo leeyahay ee Gobolka WA. Tan waxaa ka mid ah qandaraaska xarunta lagu hayo ee ku taal Waqooyiga-galbeed ee Tacoma oo lagu qaban jiray dadka la qabtay, ee aan sharciga lahayn ee qandaraaskoodu dhacayo 2025 oo aan dib loo cusbooneysiin karin.
Eeg Mid ka mid ah Ameerika 2021 Sharci-dejinta ayaa ku guuleysatay wixii macluumaad dheeraad ah.